James Swan oo golaha ammaanka la wadaagay xaaladda amni iyo doorashada Soomaaliya 2020-2021-ka. – Kismaayo24 News Agency
by admin 25th February 2020 0115
Wakiilka Qaramada Midoobay Arrimaha Soomaaliya James Swan oo ka qaybgalay fadhiga Golaha Ammaanka waxa uu ka sheegay Xaaladda amni ee Soomaaliya iyo Doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo dhammaadka sanadkaan 2020-ka ilaa bilawga 2021-ka.
Fadhiga Golaha Ammaanka oo ka qabsoomay Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa diyaaradda lagu saaray arrimo dhowr ah gaar ahaan Isbadalka Soomaaliya iyo Marxaladda geeddi socodka.
Sanadka 2020 wuxuu leedahay awood ay u noqon karto sanad isbedel ku keena Soomaaliya. Dhowr arrimood oo muhiim ah oo qaran ah ayaa la soo gabagabeeyey waxayna saameyn ku yeelan doonaan himilada Soomaaliya sannadaha soo socda ayuu yiri Danjire James Swan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo la-hawlgalayaasheeda caalamiga ah ay ku heshiiyeen ahmiyadaha ugu waaweyn ee ah in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020 doorasho loo dhan yahay oo qof iyo Cod ah.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya in la sameeyay horumar la xiriira sharciyeynta muhiimka ah ee lagu xoojinayo qaab dhismeedka maaliyadda Soomaaliya, sida Sharciga Shirkadaha iyo Sharciga Maareynta Maaliyadda Dowladda.
Waxa uu soo hadal qaaday Miisaaniyadda 2020 ee uu ansixiyay Baarlamaanka, uuna saxiixay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, tallaabadaasina ay muujineyso kobaca daqliga dalka eejoogtada ah.
admin 20th May 2018 20th May 2018
Mohamed Abdirashid Abaajo 26th February 2019